I-125 YEETATTOO ZENGALO EZIBALASELEYO ZAMADODA: IZIMVO EZIPHOLILEYO + UYILO (ISIKHOKELO SIKA-2021) - IITATTOOS
Eyona Iitattoos I-125 yeeTattoo eziLungileyo zaMadoda
Iitattoo zengalo zisebenza kakuhle kunye nezinye zeengcinga ze tattoo ezipholileyo. Ngapha koko, awungekhe uhambe gwenxa ngokufumana iitattoo zengalo emadodeni. Ngeendlela ezininzi ze-badass zokukhetha…
Iitattoo zengalo zisebenza kakuhle kunye nezinye zeengcinga ze tattoo ezipholileyo. Ngapha koko, awungekhe uhambe gwenxa ngokufumana iitattoo zengalo emadodeni. Ngeendlela ezininzi zokuyila ze-badass onokukhetha kuzo kunye nokukhetha ingalo ephezulu, ngasemva, ngaphambili, kwicala, kwingalo, bicep , tricep okanye igcwele umkhono umvambo, iingalo yeyona ndawo ifanelekileyo kubafana abaninzi.
Umzekelo, i-tattoo yengalo ephezulu inokufihlwa emsebenzini, kunye nokukhetha ukuvumela ubugcisa bakho bunyuke busegxeni lakho bujikeleze umva okanye isifuba . Kukho ii-bicep tattoos zangaphandle ezinwenwela kwi-triceps, umva we tattoo yengalo ephakamisa indawo ende egudileyo, kunye ne-tattoo yengalo yangaphambili echitheka emacaleni. Okokugqibela, kukho uyilo lwengalo epholileyo engenamda yokuqwalaselwa, ngemizobo yazo zonke iimilo, ubungakanani, kunye nemibala eya kulunga.
Ukuba ufuna ezona tattoos zengalo zibalaseleyo, uyayithanda le galari yeengcinga ze tattoo zamadoda kwiingalo zamadoda. Ukusuka kwincinci kunye nokulula ukuya kwisizwe ukuya kumbala, fumana ii-tattoos zangasekhohlo nezasekunene zabafana!
1Imibono yeTattoo yengalo epholileyo
1.1IiTattoos zengalo ephezulu
1.2IiTattoos zangaphakathi zoMzimba
1.3Umva weeTattoos zengalo
1.4Icala lengalo Tattoo
1.5Umzimba wangaphambili Tattoo
1.6IiTattoos zengalo ezilula
MbiniEzona zoyilo zeTattoo zilungileyo
Imibono yeTattoo yengalo epholileyo
Nokuba ufuna ukutsala umdla kwiingalo zakho zemisipha okanye ufuna nje ukufumana umzobo onentsingiselo, esi sikhokelo siyakukukhuthaza ukuba uphonononge yonke eyona tattoo ilungileyo Yila izimvo kudala yenziwa.
Kuba ingalo yenziwe ngamacandelo aliqela anokufakwa umvambo ngokwahlukeneyo okanye ngokudibeneyo, kubalulekile ukuqwalasela uyilo ngokudibeneyo nendawo.
IiTattoos zengalo ephezulu
IiTattoos zengalo ephezulu ngokwendalo zilungiselela uyilo oloyikekayo, zikunike inkululeko yokuziveza ngokuyilayo kodwa ufihle i-inki yakho njengengcali. Iingcamango ezingaphezulu zetattoo yengalo zineenkcukacha kunye nesimbo.
Isiqwenga esikhulu sinokwandiswa siye kwingalo esezantsi nakwingqiniba njengoko usongeza umsebenzi wobugcisa. Ngokufanayo, uyilo lunokwanda ukuya egxalabeni kwaye ligqibe ngasemva okanye esifubeni ujongo lwe-badass.
iintlobo ezahlukeneyo zeenwele zamaza
Iimpawu ezilula zengalo ephezulu zibolekisa imibala emnyama, emhlophe nengwevu. Ezi ntlobo zoyilo zihlala zibandakanya imilo yesizwe okanye yejometri yokugqibezela uyilo.
Nangona kunjalo, iitatoo ezaziwa kakhulu ukuba zifike engalweni yakho zibandakanya uyilo lwendoda ye-alpha eyindoda efana nale Ingonyama , inamba , phoenix , ukakayi , isikhova , Ingcuka , inyoka, ibhere, okanye ukhozi.
IiTattoos zangaphakathi zoMzimba
Iitattoo zangaphakathi ezingalo lolunye uthandwayo kubafana. Ezi tattoos zamadoda zakudala zinokubekwa kwi bicep okanye ingalo , Kuxhomekeka ekubeni ufuna i-inki yakho ibonakale njani. Ngenxa yobukhulu bengalo yakho yangaphakathi, ilungele umsebenzi oneenkcukacha.
Unokuthatha isigqibo kwinto enye yoyilo okanye imizobo emininzi yokwenza ikholaji. Kuxhomekeke kubugcisa ofuna ukubufumana, unokufumana umvambo kwisandla esisezantsi okanye esingaphezulu.
Umva weeTattoos zengalo
Umva we tattoo yengalo ulunge kakhulu kuyilo olude, olunolusu. Iitattoo zengalo yangasemva ezizodwa zibandakanya iintolo, iintsiba, ubugcisa besizwe, iminqamlezo, iikowuti, amanani kunye neminye imifanekiso emincinci.
Nangona kunjalo, kulungile ukuba uqaphele ukuba umva wengalo unokuba ngu indawo ebuhlungu yokwenza umvambo .
Icala lengalo Tattoo
Icala lesithathu iitattoo zinokubaleka ukusuka ezantsi ziye kwingalo ephezulu. Eli candelo lengalo lihlala lihlala uyilo oluncinci, olulula abafana abafuna ukuligquma.
Kodwa ukusonga uyilo olupholileyo oluvela kwicala lengalo yakho, ujikeleze ingqiniba yakho, ukuya kuthi ga kwiitreps zakho nakwingalo ephezulu kunokunika indawo eninzi yoyilo.
Umzimba wangaphambili Tattoo
Umvambo wengalo wangaphambili, okwabizwa ngokuba yingalo yangaphambili, ubonelela ngeyona canvas ipholileyo. I tattoo engaphambili inokuba sisiqalo semikhono enesiqingatha okanye ekugqibeleni ithambo elinemikhono epheleleyo yamadoda.
Ngokunikwa ukubalasela nokubonakala, abafana kufuneka bazigcine ngokwenyani ezona zixhobo zeengalo zale ndawo.
IiTattoos zengalo ezilula
Iitattoo zengalo elula zinokulingana phantse naphi na. Uyilo olulula nolincinci luza ngohlobo lweekowuti, amagama osapho, amanani ejiyometri, imigca, iintolo, njl.
Nangona kunjalo, imibono elula ye tattoo ayisiyiyo kwaphela eyindoda; eminye imiyalezo inobuhle nje ekuhlambulukeni nasekuhleni.
Ezona zoyilo zeTattoo zilungileyo
Ukuphefumlelwa, nazi ii-tattoos eziphezulu ze-125 ezipholileyo zamadoda. Le ngqokelela yeengcinga ze-tattoo kubafana ziya kukunceda ukuba uze nengcinga yoyilo entsha eyahlukileyo oya kuyithanda!
I-astro ifuna i-synastry
iinwele ezityebileyo zamadoda ukuchetywa kweenwele
3 emacaleni ukucheba iinwele
ukuvumisa ngeenkwenkwezi indlu intsingiselo
zithini na ilanga lam inyanga nemiqondiso yokuphuma
ukucheba iinwele ezityebileyo amadoda